Wp/blk/စဉ်မီဝေး - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > စဉ်မီဝေး
စဉ်မီဒေါ်နာ (စဉ်ဗို) ဝေး (အဲင်းကလေတ်: Jimmy Donal Wales/ Jimbo) (၁၉၆၆ သြဂဲစ် ၇)နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အမေႏရိကန်ႏ အဉ်တာနဲက်ထာꩻမာꩻဗွေႏသား တဖြာꩻတဲင် တယ်ႏထောင်ႏကိုဖေႏ ဝီခီပီးဒီးယားတဖဲ့ꩻတခဝ် ခွုမ်မာꩻနွန်ႏဖေႏအာႏသား တဖြာꩻဒျာႏသွူ။ ဝွေꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝီခီမီဒီယာရွဉ်တောင်ႏတာႏအစွိုꩻ ဗုတ်အစွိုꩻနွို့တဖြာꩻတဲင် ဗုတ်အစွိုꩻ ကဖေႏအပ်ဒါႏ "တယ်ႏထောင်ႏအစွိုꩻဗူႏသား"ခင်ႏလမ်းလဲ့ အဝ်ႏလꩻခါꩻနဝ်ꩻသွူ။  တွိုႏ ၂၀၀၄ ဗာႏ ဝွေꩻတောမ်ႏ အေင်စျယ်လာ ဗီလီနဝ်ꩻ တယ်ႏထောင်ႏညီꩻခန်းဝင်ꩻ အငိုꩻလို့တဝ်း ဝဲက်သုဲက်ကထွာဒါႏ ဝီခီယာနဝ်ꩻသွူ။
စဉ်မီဝေး (Jimmy Wales)
စဉ်မီဒေါ်နာဝေး (Jimmy Donal Wales)
(1966-08-07) ဩဂဲက် ၇၊ ၁၉၆၆ (သက် ၅၅)
Huntsville, en:Alabama, United States
စဉ်ဗို-Jimbo (screen name)
en:Auburn University (BS)
University of Alabama, Tuscaloosa (MS)Indiana University, Bloomington
Internet entrepreneur, en:webmaster, financial trader (formerly)
≈US$၁ million (2014)
Chair of en:Wikimedia Foundation (2003–2006)
Chair emeritus of en:Wikimedia Foundation (2006–present)
en:Florence Devouard (as Chair of Wikimedia Foundation)
en:Sunlight Foundation (advisory board) (until September 2020)
en:MIT Center for Collective Intelligence (advisory board)
en:Guardian Media Group (until April 2017)
Pamela Green (m. 1986; div. 1993)
Christine Rohan (m. 1997; div. 2011)
en:Kate Garvey (m. 2012)
အဝ်ႏ (၃) ဖြာꩻ
Jimmy Wales' voice
၂၀၀၁ ဗာႏ ကဒင်ႏထင်ႏခါꩻဒါႏ ဝီခီပီးဒီးယားခိန်ႏနဝ်ꩻ စဉ်မီဝေး တောမ်ႏလာရီသန်ဂါ၊ ပါတောမ်ႏလိုꩻလင်ဖုံႏယို ထွာကူႏညီႏစွဲးကမ်းကို အခေႏခံႏအွတ်ꩻရွီးသားသွူ။ ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အငိုꩻလို့တဝ်း အဉ်တာနဲက်လဲင်းလောင်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏဒျာႏတဲင် အွဉ်ႏစွꩻဒင်ႏထင်ႏထွူညတဝ်း လိုꩻသေအာလွဉ် မိဉ်ꩻတန်လွဉ်စွဉ်ႏ တလဲင်ႏချင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။  လိုꩻအာနဝ်ꩻတဲ့ ဒေါ့ꩻဒျာႏ စိဉ်မီဝေးနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏတယ်ႏထောင်ႏဖက်သားရိုꩻလဲ့ ဝွေꩻတောမ်ႏဝွေꩻနဝ်ꩻတဲ့ ဝီခီယို ထွာဒျာႏ ဝွေꩻတဖြာꩻတယ်ႏထောင်ႏသားအကျောင်ꩻ အဝ်ႏဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ 
အမေႏရိကန်ႏခမ်း အယ်ဗားမားခမ်းနယ် ဟန့်ဗီး(Huntsville, Alabama)ကို ကလွူးဖွာꩻဒါႏ စိဉ်မီနဝ်ꩻ သွဉ်ထူႏလွေꩻဗာႏပညာႏ ပုဂ္ဂလိကကျောင်ꩻပေႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တောမ်ႏ ရွဉ်ရေꩻတောင်ꩻရေꩻဘာႏသာႏတဲင် လꩻလွေꩻခန်း တက္ကသိုလ်ႏဗွဲ့တောမ်ႏ မဟာဗွဲ့နဝ်ꩻသွူ။ ထွာမဟာတန်ꩻကျောင်ꩻသားဖဝခိန်ႏ စိဉ်မီဝေးနဝ်ꩻ သွဉ်ဖေႏဗာႏလိတ် တက္ကသိုလ်ႏ(၂)ဗာႏကိုနဝ်ꩻသွူ။  စိဉ်မီဝေးနဝ်ꩻ ယွုမ်းအံႏရိုႏသေႏမွေး အုဲင်းရန်း ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻသားတဲင် နမ်းတောမ်ႏနမ်း အဝ်ႏဒေါ့ꩻချာ ဝွေꩻယိုလွစ်တခြင်ရေꩻဝါဒီသားဒျာႏ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ 
စိဉ်မီဝေးနဝ်ꩻ တယ်ႏထောင်ႏခါꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းအတန်သွတ်ꩻ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ကထွာဒါႏ ဝီခီပီးဒီးယားတဲင် ၂၀၀၆ ဗာႏခိန်ႏနဝ်ꩻ တုဲင်း(Time)မဂ္ဂဇင်းကို ခံႏဗာႏ လွိုက်ရွေꩻအွောန်ႏနယ် သြဇာႏဒို့ꩻတခြို့မုꩻ အတန်သွတ်ꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏအနေႏနဝ်ꩻသွူ။  
↑ 1.0 1.1 Garside၊ Juliette။ "Jimmy Wales: digital champion of free speech"၊ The Observer၊ August 3, 2014။
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Chozick-2013-06-30
↑ Williams၊ Christopher။ "Wikipedia co-founder Jimmy Wales exits Guardian board over conflict of interest with Wikitribune news site" (in en-GB)၊ The Telegraph၊ April 25, 2017။
↑ Wikipedia: 50 languages, 1/2 million articles။ Wikimedia Foundation Press Release။ en:Wikimedia Foundation (2004-04-25)။ 2009-04-10 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Wikipedia, the free encyclopedia, reaches its 100,000th article။ Wikipedia Press Release။ en:Wikipedia (2003-01-21)။ 2009-04-10 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ 7.0 7.1 "Brain scan: The free-knowledge fundamentalist"၊ Technology Quarterly၊ The Economist၊ 2008-06-05။ 2008-06-09 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။
↑ Keen၊ Andrew။ "Andrew Keen on New Media"၊ en:The Independent၊ 2008-06-02။ 2008-06-08 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 24 December 2008။
↑ Board of Trustees/Restructure Announcement။ Wikimedia Foundation website (April 26, 2008)။5April 2009 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 2008-04-27 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named 2.0
↑ Singer၊ Michael။ "Free Encyclopedia Project Celebrates Year One"၊ en:Jupitermedia၊ January 16, 2002။ 2008-02-27 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 16 March 2003။
↑ Poe, Marshall (September 2006). "The Hive". en:The Atlantic Monthly. Retrieved on February 29, 2008. “Wales, though, wasabusinessman. He wanted to buildafree encyclopedia, and Wikipedia offeredavery rapid and economically efficient means to that end. The articles flooded in, many were good, and they cost him almost nothing... Wales’s benign rule has allowed Wikipedia to do what it does best: grow. The numbers are staggering.”
↑ Halstead၊ Larry။ "Wikipedia teams with Yahoo!"၊ Tampa Bay Business Journal၊ April 7, 2005။ 2009-04-12 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Larry_Sanger_Springs_Citizendium
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Parmy Olson
↑ 16.0 16.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named qanda
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named reasonmag
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named fastcompany
↑ Anderson၊ Chris။ "Jimmy Wales: The (Proud) Amateur Who Created Wikipedia"၊ Time၊ April 30, 2006။ February 17, 2008 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 30 September 2020။
↑ Frith၊ Holden။ "Wikipedia founder launches rival online encyclopaedia"၊ en:The Times၊ March 26, 2007။ 2008-03-07 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။
en:Wikimedia Commonsကိုနဝ်ꩻ တောမ်ႏJimmy Walesယို ကဆဲင်ႏဒါႏ မီဒီယာအဝ်ႏသြ။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/စဉ်မီဝေး&oldid=5348724"
Last edited on 28 February 2022, at 14:51
This page was last edited on 28 February 2022, at 14:51.